အင်ျဂလိပျစာက တိုးတကျစဖေို့ရာ ဆရာကောငျးတဈယောကျရဲ့ နညျးပေးလမျးညှနျမှုအောကျမှာ ၆ လကနေ တဈနှဈလောကျမြား ကွိုးစားကွညျ့စမျးပါ။ အင်ျဂလိပျစာကို ဘယျနရော၊ဘယျအခွအေနမြေိုးမှာပဲရောကျရောကျ ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ အသုံးခနြိုငျပါလိမျ့မယျ။
Self-study ကိုအားပေးပမေယျ့ ကိုယျတဈယောကျတညျးလလေ့ာတာထကျ ဝါသနာတူသူငယျခငျြးတှစေုပွီး လလေ့ာတာပိုကောငျးပါတယျ။မသိတာရှိရငျလဲ အင်ျဂလိပျမဂ်ဂဇငျးမြားမှတဆငျ့ မေးမွနျးနိုငျကွပါတယျ။ကြောငျးတကျနဆေဲ ညီငယျ၊ညီမငယျမြားအနနေဲ့ ကြောငျးပွီးမှ အားသှနျခှနျစိုကျလလေ့ာတော့မယျလို့ အခြိနျရှမေ့ထားပဲ၊ တဈနတေ့ဈလံ ပုဂံဘယျပွေးမလဲဆိုတဲ့ ထုံးနှလုံးမူပွီးလလေ့ာကွစလေိုပါတယျ။ အဲဒါတှတေတျတော့ ဘာသုံးစားလို့ရမှာလဲ။ဒို့က ကိုယျ့တိုငျးပွညျမှာ ကိုယျနတော ဆိုတဲ့ စကားမြိုးလဲ နားမဝငျပါနဲ့။ မွနျမာပွညျဟာ ရှလြေှ့ောကျ ဒိထကျပိုပွီး တိုးတကျထှနျးကားလာဖို့ပဲရှိပါတယျ။
ခတျေနဲ့အမီရငျဘောငျတနျးဖို့ အင်ျဂလိပျစာဟာမရှိမဖွဈလိုအပျခကျြတဈခု ဖွဈလာနပွေီဆိုတာ သဘောပေါကျကွပွီး အခြိနျကိုအကြိုးရှိစှာအသုံးခစြလေိုပါတယျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာလလေ့ာမှုအဆငျ့တှကေို အောကျမှာခှဲခွားပေးထားပါတယျ။အဲဒီအဆငျ့တှကေ ကိုယျလကျရှိသိထားတဲ့ အင်ျဂလိပျစာအဆငျ့အတနျးကိုပွောတာပါ။တက်ကသိုလျတကျနပေမေယျ့ ကိုယျသိထားတာက elementary level ပဲရှိမယျဆိုရငျ အဲဒီအဆငျ့က စပါ။မရှကျပါနဲ့။မကွောကျပါနဲ့။ ဇီးရိုးကနေ ဟီးရိုးဖွဈအောငျ လုပျပွလိုကျပါ။ အဆငျ့လိုကျလလေ့ာသငျ့တဲ့ အင်ျဂလိပျစာအုပျတှကေိုလဲရေးပေးထားပါတယျ။ဒေါငျးလို့ရတဲ့ လငျ့တှကေို အဆုံးမှာဖျောပွပေးထားပါတယျ။အစက စာရေးတဲ့ဆရာတှကေိုထောကျထားလို့ လငျ့တှမေပေးတော့ဘူးလို့ တှေးထားပမေယျ့၊စာအုပျဝယျယူရခကျတဲ့နရောတှမှော ရှိတဲ့သူတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီးဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျ။ မိမိကပိုကျဆံလဲ တတျနိုငျတယျ။စာအုပျတှကေိုလဲ ရနိုငျတဲ့အခွအေနမြေိုးရှိတယျဆိုရငျ ကိုယျပိုငျဝယျယူပွီး ရေးသားတဲ့ဆရာတှကေို အားပေးကွစလေိုပါတယျ။
If you want to speak English, speak it.
If you want to write English, write it.
Synonyms and Antonyms (ဆငျတူယိုးမှား နှငျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျစကားလုံးမြား)
Grammar အတှကျ brighter English Grammar 1-4 ကိုလလေ့ာရငျ ပွညျ့စုံလုံလောကျတယျလို့လဲ ဆရာကွီးမြားက ညှနျးကွပါတယျ။အင်ျဂလိပျလိုတှပေဲရေးထားတာတှရေ့ငျ ဖတျရမှာမရဲမှာစိုးလို့ အခွားလလေ့ာသငျ့တဲ့ မွနျမာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပျတှကေို ရေးပေးလိုကျပါတယျ။ကြှနျတျောလလေ့ာခဲ့တဲ့ပုံစံတှသောဖွဈပွီး မိမိတို့လိုအပျသလို အပွောငျးအလဲလုပျနိုငျပါတယျ။
Brighter English Grammar 1-4 series
Brighter Grammar (1)
Brighter Grammar (2)
Brighter Grammar (3)
Brighter Grammar (4)
Elementary Level ( အခွခေံအကဆြုံးအဆငျ့)
(၁) အခွခေံအင်ျဂလိပျသဒ်ဒါ (ဦးသိနျးလှငျ)
(၂) A beginner's Lessons in English by U Thein Lwin
(၃) ဝေါဟာရပဒသော (ဦးသိနျးလှငျ)
(၄) A Guide to English Usage by U Thein Lwin
(၅) Good Grammar by Dr. Min Tin Mon
(၆) ဆရာလှတျအင်ျဂလိပျစာရေးနညျး ၁+၂ ( ဦးအောငျဟိနျးကြျော)
(၇) ဆရာလှတျအင်ျဂလိပျစာ (ဆရာဒှေး)
(၈) Essential English Grammar in Use
Pre-intermediate Level ( အလယျတနျးအဆငျ့)
(၂)Good Grammar by Dr. Min Tin Mon
(၃)Essential English Grammar in Use
(၁)English 900 (Speaking)
(၁)Sentence Construction by U Thein Lwin
(၂)Stylistic Sentence Transformation 1 &2by U Aye Chit (EEAC)
(၃)ဆရာလှတျအင်ျဂလိပျစာရေးနညျး ၁+၂ ( ဦးအောငျဟိနျးကြျော)
(၄) ဆရာလှတျအင်ျဂလိပျစာ (ဆရာဒှေး)
(၁)English Vocabulary in Use
(၂)Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms
(၃)English Phrasal Verbs in Use
(၄)English Idioms in Use
(၁)Tree or Three, Ship or Sheep
(၂) Cambridge Elementary pronunciation in Use
Intermediate Level (အလယျတနျးနှငျ့ အထကျတနျးအကွိုအဆငျ့)
(၁) Oxford pocket English Grammar by A.J Thomson and A.V. Martinet
(၂) Good Grammar by Dr. Min Tin Mon
(၂)Spoken English Patterns 1+2 by Daw Than Than Nu
(၃)Our Happy Days by Dr. Khin Htay (ကိုယျတို့ရဲ့ပြျောစရာနရေ့ကျမြား-ကောငျးသနျ့စာပေ)
(၂)Longman Pocket Language Activator
(၃)English Usage by Michael Swan
(၄)Stylistic Sentence Transformation 1 &2by U Aye Chit (EEAC)
(၅)အင်ျဂလိပျ၊မွနျမာ ၂ ဘာသာ စာအုပျငယျမြား( ဦးသိနျးလှငျ၊ကောငျးသနျ့၊ဆရာမိုး)
(၆)Books of English Essays by different authors ( Dr. Min Tin Mon,အုနျးဝမျ,GCE 'O' Level essays)
(၂)English Phrasal Verbs in Use
(၃)English Idioms in Use
(၄)Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms
(၁)Lose your accents in 28 days
(၂)Cambridge Intermediate pronunciation in Use
Post-Intermediate Level (တက်ကသိုလျအဆငျ့)
(၁)Cambridge English Grammar in Use
(၂)Advanced English Grammar in Use
(၁)Say it in Better English (or) Speak it up,Speak it out by Chan Zaw Htet
(၂) Situational Dialogue, English Conversation books
(၃)English Movies with subtitles
(၄)အမရေိကနျတို့ပွောသော နစေ့ဉျသုံးအင်ျဂလိပျစကား (မငျးကြျောမငျး နှငျ့ မောငျမောငျအေး) (NTC's Dictionary of Everyday American English Expressions)
(၁)English Usage by Michael Swan
(၂)Longman English Language Activator
(၃)Academic English Writing Skills
(၂)Cambridge English Vocabulary in Use
(၇)A wonderland of Pagoda Legends by Daw Khin Myo Chit
(၈)King among men by Daw Khin Myo Chit
(၉)English Novels written by English authors
(၁)Cambridge Advanced pronunciation in Use
(၂)English Movies with Subtitles
Advanced Level (ပညာရှငျအဆငျ့)
ဤအဆငျ့ သညျ linguistics ပညာရှငျမြားအတှကျသာလိုအပျပါသညျ။
ဒီဆောငျးပါးရဲ့မူရငျးရေးသားသူ၊ စာအုပျမြားကို အငျတာနကျမှာ တငျပေးထားသူမြားကို ကြေးဇူးအထူး တငျရှိပါတယျ။ဖဘှေ့တျတှငျဖွဈစေ၊Google မှ ဖွဈစေ free download link မြားကို ရှာဖှနေိုငျပါသညျ။ အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာမှုမြား တိုးတကျကွပါစေ။
အင်္ဂလိပ်စာက တိုးတက်စေဖို့ရာ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ နည်းပေးလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ ၆ လကနေ တစ်နှစ်လောက်များ ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်နေရာ၊ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်ရောက် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Self-study ကိုအားပေးပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလေ့လာတာထက် ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းတွေစုပြီး လေ့လာတာပိုကောင်းပါတယ်။မသိတာရှိရင်လဲ အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းများမှတဆင့် မေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်။ကျောင်းတက်နေဆဲ ညီငယ်၊ညီမငယ်များအနေနဲ့ ကျောင်းပြီးမှ အားသွန်ခွန်စိုက်လေ့လာတော့မယ်လို့ အချိန်ရွေ့မထားပဲ၊ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲဆိုတဲ့ ထုံးနှလုံးမူပြီးလေ့လာကြစေလိုပါတယ်။ အဲဒါတွေတတ်တော့ ဘာသုံးစားလို့ရမှာလဲ။ဒို့က ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်နေတာ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးလဲ နားမဝင်ပါနဲ့။ မြန်မာပြည်ဟာ ရှေ့လျှောက် ဒိထက်ပိုပြီး တိုးတက်ထွန်းကားလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။
ခေတ်နဲ့အမီရင်ဘောင်တန်းဖို့ အင်္ဂလိပ်စာဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနေပြီဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပြီး အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချစေလိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာမှုအဆင့်တွေကို အောက်မှာခွဲခြားပေးထားပါတယ်။အဲဒီအဆင့်တွေက ကိုယ်လက်ရှိသိထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်အတန်းကိုပြောတာပါ။တက္ကသိုလ်တက်နေပေမယ့် ကိုယ်သိထားတာက elementary level ပဲရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီအဆင့်က စပါ။မရှက်ပါနဲ့။မကြောက်ပါနဲ့။ ဇီးရိုးကနေ ဟီးရိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပြလိုက်ပါ။ အဆင့်လိုက်လေ့လာသင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကိုလဲရေးပေးထားပါတယ်။ဒေါင်းလို့ရတဲ့ လင့်တွေကို အဆုံးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အစက စာရေးတဲ့ဆရာတွေကိုထောက်ထားလို့ လင့်တွေမပေးတော့ဘူးလို့ တွေးထားပေမယ့်၊စာအုပ်ဝယ်ယူရခက်တဲ့နေရာတွေမှာ ရှိတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိကပိုက်ဆံလဲ တတ်နိုင်တယ်။စာအုပ်တွေကိုလဲ ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူပြီး ရေးသားတဲ့ဆရာတွေကို အားပေးကြစေလိုပါတယ်။
Synonyms and Antonyms (ဆင်တူယိုးမှား နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများ)
Grammar အတွက် brighter English Grammar 1-4 ကိုလေ့လာရင် ပြည့်စုံလုံလောက်တယ်လို့လဲ ဆရာကြီးများက ညွှန်းကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲရေးထားတာတွေ့ရင် ဖတ်ရမှာမရဲမှာစိုးလို့ အခြားလေ့လာသင့်တဲ့ မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေသာဖြစ်ပြီး မိမိတို့လိုအပ်သလို အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Elementary Level ( အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်)
(၁) အခြေခံအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ (ဦးသိန်းလွင်)
(၃) ဝေါဟာရပဒေသာ (ဦးသိန်းလွင်)
(၆) ဆရာလွတ်အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း ၁+၂ ( ဦးအောင်ဟိန်းကျော်)
(၇) ဆရာလွတ်အင်္ဂလိပ်စာ (ဆရာဒွေး)
Pre-intermediate Level ( အလယ်တန်းအဆင့်)
(၃)ဆရာလွတ်အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း ၁+၂ ( ဦးအောင်ဟိန်းကျော်)
(၄) ဆရာလွတ်အင်္ဂလိပ်စာ (ဆရာဒွေး)
Intermediate Level (အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအကြိုအဆင့်)
(၃)Our Happy Days by Dr. Khin Htay (ကိုယ်တို့ရဲ့ပျော်စရာနေ့ရက်များ-ကောင်းသန့်စာပေ)
(၅)အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ ၂ ဘာသာ စာအုပ်ငယ်များ( ဦးသိန်းလွင်၊ကောင်းသန့်၊ဆရာမိုး)
(၆)Books of English Essays by different authors ( Dr. Min Tin Mon,အုန်းဝမ်,GCE 'O' Level essays)
Post-Intermediate Level (တက္ကသိုလ်အဆင့်)
(၄)အမေရိကန်တို့ပြောသော နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကား (မင်းကျော်မင်း နှင့် မောင်မောင်အေး) (NTC's Dictionary of Everyday American English Expressions)
Advanced Level (ပညာရှင်အဆင့်)
ဤအဆင့် သည် linguistics ပညာရှင်များအတွက်သာလိုအပ်ပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့မူရင်းရေးသားသူ၊ စာအုပ်များကို အင်တာနက်မှာ တင်ပေးထားသူများကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ဖေ့ဘွတ်တွင်ဖြစ်စေ၊Google မှ ဖြစ်စေ free download link များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမှုများ တိုးတက်ကြပါစေ။